‘बल्ल १६ वर्षकी भएँ, प्रेम गर्ने बेलै भएको छैन’ : अक्षता
पछिल्लो समय युवापस्ता इन्टरनेटसँग नजिक छ । युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेर धेरै कलाकारले आफूलाई स्थापित गराएका छन् । खुबी हुनेलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न युट्युब नै पर्याप्त बन्न थालेको छ । युट्युबबाट नै धेरै कलाकारले आफूलाई नेपाली संगीत क्षेत्रमा आफूलाई परिचित गराइसकेका छन् । त्यही भीडमा आफ्नो पहिचान खोज्दैछिन् १६ वर्षीया अक्षता अधिकारी ।
अन्ताक्षरीबाट संगीत शुरू
पृथक् शैलीमा गीत गाउन रुचाउने अधिकारी कक्षा ३ मा पढ्दा नै पहिलोपटक गीत गाएको अनुभव सुनाउँछिन् । स्कुल बसमा अन्ताक्षरी गाएको सुनेर शिक्षकले विद्यालयको कार्यक्रममा गीत प्रस्तुत गर्न भनेपछि उनले अंग्रेजी गीत ‘एभ्रिथिङ आई डु’ पहिलोपटक गाएकी थिइन् । त्यसपछि शिक्षक तथा साथीहरूले उनको प्रशंसा गर्न थालेको उनी सम्झिन्छिन् ।
१४ वर्षकै उमेरमा उनले इमेज टेलिभिजनको ‘उत्कृष्ट बाल गायन अवार्ड’ जितिन् । उनले गाएका गीतलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले मन पराए । राम्रो गीत गाउँछौ भनेर तारिफ गरे । त्यसपछि उनी ‘कृपा अन्प्लग्ड’ मार्फत ‘तिम्ले त हैन, तिम्रा आँखाहरूले...’ गाइन् । उनको गीतलाई युवाहरूले झनै रुचाए । भन्छिन्, ‘मैले त सधैं उस्तै गाएझैं लाग्छ तर साथीहरूले तारिफ गर्दा राम्रो गरेंछु भन्ने लाग्छ ।’
अक्षता सफल हुनुमा उनको परिवारको पनि उत्तिकै हात छ । उनले गायनमा रुचि देखाएपछि परिवारले त्यही किसिमको वातावरण मिलाइदियो । ‘मैले जे–जति गरेकी छु, त्यसको श्रेय म मेरो बा–आमालाई दिन्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरूले मलाई गीत गाउन प्रेरित गर्नुभयो ।’ उनी अहिले सृजना कलेज अफ फाइन आर्टस्मा संगीत सिकिरहेकी छिन् । अक्षता सुनाउँछिन्, ‘म मेरो पूरै जिन्दगी संगीतमा बिताउन चाहन्छु ।’ अरू नवकलाकारले पनि आफ्नो परिवारको साथ पाउने हो धेरै राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने उनलाई लाग्छ ।
अक्षतालाई ज्याज संगीत धेरै मन पर्छ । त्यसबाहेक पप, रक–पपमा पनि रुचि छ । मान्छेले लोक संस्कृतिमा आधारित गीतलाई बढी रुचाउँछन् भन्ने उनले बुझेकी छिन् । उनले गाएका सबै गीत रुचाइएको छ । भन्छिन्, ‘मैले त अझैसम्म आफूले सक्नेजति गाएकै छैन । यसभन्दा धेरै राम्रो गाउनु छ ।’ उनले अर्का गायक अमन प्रधानसँग मिलेर ‘आलोप’ गाइन् । उक्त गीतमा उनको मोडलिङ पनि देख्न सकिन्छ । त्यो गीत युट्युबमा त्यत्तिकै हिट भयो ।
फिल्ममा समेत खेल्न ‘अफर’
त्यसो त उनलाई चलचित्रमा अभिनयको अफर पनि नआएको होइन । आफूलाई दुईओटा चलचित्रमा अफर आएको उनी बताउँछिन् । ‘उहाँहरूलाई मैले अभिनय गर्नसक्छु भन्ने पनि थाहा छैन होला तर फिल्मको अफर गर्नुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर म बच्चै थिएँ । बाबा मम्मीले ऊ सानै छे भन्नुभयो ।’ यद्यपि भविष्यमा अभिनय गर्न रुचि भएको उनी बताउँछिन् ।
उनलाई नेपाली संगीत क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित हुन गाह्रो छ भन्ने लाग्दैन । भन्छिन्, ‘नयाँ कलाकारलाई यहाँ स्थापित हुन सजिलो छ तर हामीसँग फरक खालको ट्यालेन्ट हुन जरूरी छ । यहाँ थुप्रै कलाकार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो कलालाई प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउनुभएको छैन ।’
फेसबुकमा फेक आइडी
नेपाली संगीतलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गर्दैछु भन्ने उनका प्रशंसकहरू पनि प्रशस्तै छन् । फेसबुकमा एड गर्न नमिल्ने गरी साथी भइसकेका छन् भने उनलाई प्रशंसा गरेर थुप्रै म्यासेजहरू नियमित आउने गरेको उनी बताउँँछिन् । आफ्नो नाममा थुप्रै नक्कली एकाउन्ट भएपनि आफ्नो फ्यान पेजमा आउने म्यासेजले आफूलाई खुशी लाग्ने उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘धेरैजनाले मेरो गायन मन परेको भन्दै म्यासेज पठाउनुहुन्छ । कोही–कोहीले त नराम्रा कमेन्ट समेत गर्छन् ।’
कतिले अक्षतालाई सेलेना गोमेजसँग तुलना गर्छन् । उनी भन्छिन्, ‘केही मान्छेहरूले मलाई सेलेना गोमेजको जस्तो अनुहार भएको समेत बताएका छन् ।’ कसैले उनको स्वर बिछट्टै मन परेको बताउँछन् । कसैले अभिनय र व्यवहार दुवै मन परेको बताउँछन् । उनलाई बुवाले स–साना गल्तीलाई पनि नोट गर्ने र त्यसलाई सुधार्न भन्ने गरेको बताउँछिन् ।
अक्षतालाई स्टेजमा गाउनका समेत बेलाबेला निम्ता आउँछ । पोखरा र काठमाडौंमा उनले ‘लाइभ’ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छिन् । ‘मैले पोखराको लेक साइडमा दुईपटक स्टेजमा गाइसकें तर काठमाडौंमा त कतिचोटि गाएँ, भुलिसकें ।’ उनी थप्छिन्, ‘स्टेजमा गाउने बेला मलाई सधंै डर लाग्छ तर दर्शकले गाइसकेपछि राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिँदा आफंैलाई अचम्म लाग्छ ।’
म त बच्चै छु
१६ वर्षे उनलाई ‘चल्तीको प्रेम’का बारेमा प्रश्न सोधियो । उनी आफूलाई ‘प्रेमको अनुभव नभएको’ बताउँछिन् । आफ्ना साथीहरूसँग खुबै मिल्ने अक्षता प्रेमका बारेमा सोच्ने उमेर नै नभएको ठान्छिन् । ‘प्रेमको बारेमा मलाई कसरी थाहा होस् ? म त अझै बच्चै छु ।’ उनी हाँस्दै भन्छिन्, ‘एकपटक माइक्रोमा रोमान्टिक प्रेम गीत बज्यो । त्यसबेला उक्त गीतमा मैले चाहिँ कसको कल्पना गरूँझंै लाग्यो र आफैंदेखि हाँसो लाग्यो । पछि मैले मेरा साथीहरूलाई पालैपालो सम्झें ।’
आदर्श र नशा
उनी स्टिभी वन्डरलाई आफ्नो आदर्श गायकका रूपमा लिन्छिन् । भन्छिन्, ‘उहाँ आँखा देख्नुहुन्न तर यति राम्रो गाउनुहुन्छ कि म उहाँको लाइभ कन्सर्टमा गएँ भने त मर्छु होला ।’
संगीत के हो ? अक्षता भन्छिन्, ‘संगीत नशाजस्तै हो । हँसाउन पनि सक्छ, रुवाउन पनि सक्छ । जोड्न पनि सक्छ, छुटाउन पनि सक्छ ।
उनको भविष्यको योजना संगीतमा लाग्ने नै हो तर उनलाई संगीतलाई नै भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि लाग्दैन । अभिनय, गायन र संगीतलाई एकसाथ अगाडि बढाउन चाहेकी अक्षतालाई उनका बुवाआमाको साथ सधैं मिल्छ भन्ने लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘आफूले जे गर्छु, त्यो राम्रो गर्न सकुँ भन्ने लाग्छ । मेरो बाबा ममीले पनि सधैं यही सपना देखिरहनुहुन्छ ।’
मंसिर २५, २०७३ मा प्रकाशित